Indostria ao Antsirabe : nitatitra ireo hosoka isan-karazany | NewsMada
Indostria ao Antsirabe : nitatitra ireo hosoka isan-karazany
Par Taratra sur 28/06/2016
Niangavian’ny Sendikan’ny indostria eto Madagasikara (Sim) ny minisitry ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, Chabani Nourdine, hitsidika orinasa maromaro ao Antsirabe, ny 17 sy 18 jona lasa teo. Tsiahivina ihany fa Antsirabe, tanàna voalohany ivondronan’ny orinasa maro eto Madagasikara. Orinasa notsidihina tamin’izany, ny Les Moulins de Madagascar, simenitra ao Ibity, Malto, Polyconcrète ary Star. Hijery akaiky ny olana mahazo ireo orinasa ireo ny antony niantsoan’ny Sim ny minisitera mpiahy azy ireo. Tamin’io fotoana io koa, tany an-toerana ny filohan’ny Repoblika, nialoha ny fitokanana ny biraon’ny Tahirimbolam-panjakana.
Ny andron’ny 17 jona, nambaran’ny mpandraharaha mpitantana ireo orinasa ireo tamin’ny minisitry ny Indostria ny olana eto Madagasikara. Fifaninanana tsy ara-dalàna, noho ny fampidirana entana tsy mazava avy any ivelany. Hita amin’izany ny fanaovana varotra tsy misy faktiora, hosoka eny amin’ny fadintseranana, hosoka amin’ny fangalarana marika fananan’ny orinasa hafa, filazana tsy marina momba ireo vokatra maro mitobaka amin’ny tsena eto an-toerana. Tsy mifanaraka amin’ny fenitra takina ireo rehetra ireo, miteraka fifaninanana tsy ara-dalàna.
Nisy ny fiaraha-nidinika tamin’ireo mpitantana ny orinasa ireo, tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Niaraka tamin’ny minisitry ny Indostria tamin’io fotoana io ny minisitry ny Varotra, Vola sy ny tetibola ary ny tale jeneralin’ny fadintseranana.